शिशु र बच्चाहरू | पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन
बच्चाहरू र पारिवारिक जीवनको साथ बच्चाहरूको रक्षा गर्दै
तपाईंको बच्चा हुर्काउनु एक सुन्दर र इनामदायी अनुभव हो, तर कहिलेकाँही यो गाह्रो हुन सक्छ। पारिवारिक जीवन यहाँ छ एक आमा बुबा को रूपमा तपाईंको यात्रा मा तपाईंलाई समर्थन गर्न, तपाईंको व्यावहारिक सीप विकास गर्न मद्दत गर्न। प्रत्येक परिवार फरक छ। त्यसकारण पारिवारिक जीवनले थुप्रै बच्चाहरू र पारिवारिक सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई अद्वितीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र मात गर्न मद्दत गर्दछ। चाहे तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको व्यवहार प्रबन्ध गर्न मद्दत चाहिएको हो, वा तिनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित छौं, हामी यहाँ परिवार समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि छौं।
अभिभावकलाई सहयोग गर्नु भनेको बच्चाहरूलाई सहयोग गर्नु हो
पारिवारिक जीवन शिशुहरू र युवा मानिसहरू बढ्न र विकास गर्न समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ। यो हासिल गर्न, हामी आमाबुवाको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिन्छौं।
हाम्रा बच्चाहरू र पारिवारिक सेवाहरू बच्चा र अविभावक बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नमा केन्द्रित छन्। हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं:
तपाईंको प्यारेन्टिंग सीप सुधार गर्नुहोस्
तपाइँको बच्चामा आघातको प्रभावलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्
समुदायसँग कनेक्ट हुनुहोस् र एक्लोसन हटाउनुहोस्।
तल हाम्रो परिवार समर्थन सेवाहरूको माध्यमबाट हेर्नुहोस् र लिंकहरू पालना गर्नुहोस्।
यदि तपाईं हाम्रो सेवाहरूको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ भने लिंक प्रदान गर्नुहोस् वा हामीलाई कल दिनुहोस्।
के तपाईं आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ? पारिवारिक जीवनको शाइन प्रोग्रामले तपाईंको बच्चाको लचिलोपन र कुशलतापूर्वक रणनीतिहरूको प्रस्ताव राखेर कौशलको सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
बच्चाहरु को परामर्श
के तपाइँ तपाइँको बच्चा को बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ? के तपाइँको बच्चाको तनाव र चिन्ता कोभिड -१ pandemic महामारी को परिणामस्वरूप घर र स्कूल मा समस्या पैदा गरीरहेछ र तपाइँलाई केहि सहयोग चाहिन्छ?
पारिवारिक जीवनमा, हामीलाई थाहा छ कि जीवनले चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ, यसैले हामी व्यक्तिगत परामर्श सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। एक्लै संघर्ष नगर्नुहोस्, मद्दतको लागि सोध्नुहोस्। आज हाम्रो एक सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहोस्
अभिभावक र शिशु समर्थन
बच्चाहरूको समर्थन समूहहरू
बच्चाहरू आघात, परिवार हिंसा र अन्य मुद्दाहरूको लागि संवेदनशील हुन्छन्। हामी बच्चाहरूलाई अन्य युवाहरूसँग जोड्दै उनीहरूलाई समान अनुभवहरू साझा गरेर समर्थन गर्दछौं।